Mikel Arteta oo ka warbixiyay dhaawaca soo gaaray Thomas Partey
Home Horyaalka Ingiriiska Mikel Arteta oo ka warbixiyay dhaawaca soo gaaray Thomas Partey
Mikel Arteta ayaa qirtay in Thomas Partey uu ka “xumaaday” dhaawicii ugu dambeeyay ee soo gaaray wuxuuna sheegay in kulamadii isku diyaarinta xilli ciyaareedka oo yaraa iyo dalabyada Premier League ay sabab u noqon karaan.
Partey ayuu dhaawac ka soo gaadhay muruqa intii lagu jiray guuldaradii todobaadkii hore ka soo gaadhay kooxda Aston Villa taas oo xaqiijisay in uu seegi doono kulanka Axada ee booqashada Leeds waxana ay u badan tahay in uu garoomada ka maqnaan doono ugu yaraan laba todobaad.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Ghana ayaa seegay kaliya lix kulan sababo la xiriira dhaawac muddo shan sano ah oo uu ku jiray kooxda koowaad ee Atletico Madrid laakiin kulanka Leeds ayaa noqon doona kulankii sagaalaad ee Premier League ee uu dhaawac ku maqnaa tan iyo markii uu ku soo biiray Gunners bishii October.
Waxay aheyd guuldaradii 3-0 ee ka soo gaartay Villa bishii Nofeembar halkaasoo Partey uu ka dhaawacmay bowdada, isagoo ku soo laabtay North London derby kulankii Tottenham.
Dhibaatadiisii ​​ugu dambeysay ayaa timid isagoo dhameystiray 90 daqiiqo kaliya hal jeer sanadka 2021.
“Waxa uu dareemay wax intii ay ciyaartu socotay umana malayn in ay wax aad u xun yihiin laakiin ka dib markii baadhitaanku u muuqday mid waxoogaa ka sii xumaaday,” Arteta ayaa ka hadlay dhaawaca Partey – oo ay kooxdu u xaqiijisay inay tahay dhibaato muruqa ah.
Previous articleDejan Lovren oo shaaca ka qaaday Sheekada Mohamed Salah ee Liverpool
Next articleMan United oo diyaarinaysa dalab 50 milyan oo euro ah xagaagan si ay u hesho xiddiga Borussia Dortmund